बुलबुल नेपाल | शैलु सिंह ‘भ्वाइस अफ नेपालको’ टप २४ पुग्न सफल [भिडियोसहित]
सोमबार ०९, असार २०७६ २१:४१
शैलु सिंह ‘भ्वाइस अफ नेपालको’ टप २४ पुग्न सफल [भिडियोसहित]
सुदूरपश्चिमबाट एक्ली प्रतिस्पर्धी !
काठमाडौं, कार्तिक २५ । शैलु आरएल सिंह कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को ‘उत्कृष्ठ २४’ मा पुग्न सफल भएकी छन् । दर्शकस्रोताको भोटिङका आधारमा उनी ‘उत्कृष्ठ २४’ मा पुग्न सफल भएकी हुन् ।
शैलुले गत साता भोटिङका लागि गीत गाएका थिइन् । निर्णायकले सुरक्षित नगरेपछि उनी भोटिङमा प्रवेश गरेकी हुन् । र, शनिबार उनी दर्शकस्रोताको भोटबाट ‘उत्कृष्ठ २४’ मा पुग्न सफल भएकी छन् । ‘उत्कृष्ठ २४’ मा पुग्न सफल भएकोमा शैलुले भोट गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएकी छन् ।
धेरैलाई आश्चर्य लागेको छ । शैलुको घर कता हो ? यो प्रश्नले कयौं व्यक्तिलाई शैलुले अन्योल बनाएकी छन् । कहिले उनले आफ्नो घर काठमाडौं, कहिले कैलालीको धनगढी त कहिले बझाङ भन्ने गरेकी छन् । स्वभाविक पनि हो उनका प्रशंसक अन्योलमा पर्नु । आज तपाइँले यो प्रश्नको पनि जवाफ भेटाउनु हुनेछ ।
‘उत्कृष्ठ २४’ मा पुगेपछि शैलुले के भनिन् ? हेर्नुस्-
बझाङकी शैलु सिंह भ्वाइस अफ नेपालमा चम्किदै, पार गरिन् ब्याटल राउण्ड ! [भिडियो]
Tags : #sailu RL Singh #The Voice of Nepal